ARTICHOKE: TALOOYIN WAX KU OOL AH OO KU SAABSAN SIDA LOO BEERAY KHUDAARTA GURIGA - KOBCINTA DHIR
Ugu Weyn Ee Kobcinta dhir
Talo-soo-saar Istaraatiijiyadeed oo kor u kaca
Xirmooyinka suuq-geynta ayaa si fudud u burburay tiro badan oo ah miraha iyo khudaarta kala duwan, kuwaas oo intooda badan aan xitaa awood u lahayn in ay go'aamiyaan.
Iyadoo la tixgelinayo in kharashka qarashka ah ee "mucjisooyinka dibada" ay la mid yihiin sida dabaysha dabaysha, mararka qaarkood xitaa kama fikirno xaddiga nafaqooyinka ay isku qarinayaan.
Qaado meheradaha isgoysyada - kuuska fudud, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay dhadhan aan caadi aheyn, oo aad u caafimaad badan.
Waxaa intaa dheer, waxay yihiin wax macquul ah si ay u koraan iyagoo gadaal u gaar ah, helitaanka wax-soo-saarka wanaagsan.
Miyaad go'aansatay in aad koridho riwaayadaha? Kala soo dhawow warshadda dhow iyo samee diyaarinta hordhaca ah
Guud ahaan, farshaxanka waxaa lagu sharxi karaa geedka weyn, taas oo xitaa gaari karta 2 mitir oo dherer ah. Isla mar ahaantaana, waa waa wakhti badan, taas oo ah, ka dib markii la beeray mar-mar, muddo dheer oo ay kugu farxi doonaan dalaggiisa.
The baadiyaha of dhirta this lafteeda waa ka duwan yahay in rosette basal ka kooban yahay caleemaha aad u xoog badan iyo caleemaha.
Wixii beeridda ee xaaladaha cimilada ee Russia iyo Ukraine, dhirta waxaa loo qaabeeyey si fiican, waxa ay ku wareejisaa jiilaalka iyada oo aan dhibaato ka yar kubadda bacrimin organic, kaas oo loo isticmaali karaa sida hay, caleemo, sida balka.
In gobolka waqooyi ee Russia, si loo ilaaliyo hawlaha muhiimka ah ee baadiyaha, waa in la qoday jiilaalka iyo lagu kaydiyaa meel aad u madow leh hawo qabow ilaa guga yimaado.
Qaar ka mid ah dhibaatooyinka artichokes koraya ee our dalalka waa in maanta ma jiraan miraha warshad this in loo daayay noo.
Dabcan, in xiisaha ugu mashquul badani ay soo korayaan noocyo badan oo ajnabi ah, oo ay ku jiraan "May", "Green Ball", "Roman Violet". Intaa waxaa dheer, haddii aad horeyba u soo ururisay si ay u bilaabaan sii kordhaya khudraddaas, ka dibna waa inaad ogaataa in aysan soo saarin oo keliya abuurka.
Natiijooyinka wanaagsan ee koritaanka waxaa lagu bixiyaa ayadoo laamaha ay ka mid yihiin laamaha caleemaha, hase yeeshee taasi waa lagama maarmaan in la yeesho asxaab caan ah oo loo yaqaan 'artichoke beerta' beerta muddo dhowr sano ah. Si aad u iibsato guntooda dhirta this in hoy kasta oo gaar ah suurtagal maaha, maadaama ay si fudud ma jirin.
Diyaarinta abuurka farshaxanka: ma waxay ubaahanyihiin xayiraadda?
Hore ee abuurka ayaa ku lug leh nidaam marka abuurku uu ku dhaco heerkulka hooseeya muddo wakhti ah. Waxaa la rumeysan yahay in la maaraynta sida noocyada of artichokes ka hor beerto toos ah, waxaa suurtagal ah in si weyn u kordhiyaan dhalidda, iyo sanadka ugu horeeya ka dib markii beeritaanka iidha on this miraha delicious. Laakiin, bannaanka u badan sheeganaya in ka soo horjeeda keeni kartaa dhimashada dhirta.
Xaqiiqdu waxay tahay in boqolkiiba 70 ee geedka dhab ahaantii hore u blooms sannadka ugu horreeya ka dib markii la beero, oo runtii waa suurtogal in laga soo saaro dalag yar oo ka soo baxay, laakiin sida ubaxyada aan caadiga ahayn ayaa sababi kara dhaawac halis ah geedka.
Gaar ahaan, ma aha oo kaliya daciif ah, laakiin sidoo kale waxay ku bixisaa ciidammada loo baahan yahay in ay xoojiyaan ubaxyada iyo miraha, taas oo keentay in ay awoodi waayeen inay ku adkeeyaan xitaa hal jiilaal. Mabda 'ahaan, qaabku wuxuu ku fiicnaan doonaa kiiska marka artichoke loo qoondeeyey si gooni ah oo ah helitaanka miraha, iyo baadiyaha lama filayo in ay koraan sanado badan.
Essence iyo marxaladaha isbedelka waa sida soo socota:
Ku bilaw wareegga wareegga waa inuu ahaadaa qeybta hore ee bisha Febraayo.
Seeds ayaa si siman loogu shubay sanduuqa loogu talagalay geedo qoyan oo qoyan.
Xaaladdan, miraha waxaa loogu talagalay 6-10 maalmood heerkulka hawada laga bilaabo 22 ilaa 25 º, ilaa ay bilaabaan inay Gagaashaan.
Inta lagu jiro waqtiga oo dhan germinating abuur, ciid iyaga ka yar waa in lagu hayaa qoyan by ku buufin biyo.
Kala-bixinta degdegga ah waa in sanduuqa leh "qorraxda" ay u baahan yihiin in loo diro khadka hoose ee qaboojiyaha muddo 15 maalmood ah oo lagu hayo heerkul ah 0 ° C. Caddaynta in miraha ay diyaar u yihiin beeritaanka waxay noqon doonaan talooyinka mugdiga ah ee xididdadooda.
Haddii aad weli go'aansatid inaad ka tagto waaraajinta, ka dibna ka hor beerashada abuurka weli u baahan tahay inaad Gagaashid. Si arrintan loo sameeyo, waxay ku hayaan wakhti wakhti yar oo ducks ah, ka dibna waxay ku duuduubaan maro qoyan oo diirran. Iyadoo beerista noocan ah, geedo waa inay soo baxaan 5-6 maalmood.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan kudheerta.
Waxaan ku hawlan nahay diyaarinta sariiraha fayadhowrka: nooca carrada iyo waxa bacriminaya baahida dhirta?
Dibedda, artichokes waxay leeyihiin wax la mid ah caws, gaar ahaan yamaaruggii. Laakiin weli, isagu waa warshad beeran, sidaas darteed, si ay u horumariyaan oo midho u dhasho meel kasta, wuu diidi doonaa.
Gaar ahaan, xayawaanka dhoobo iyo meelo hadhuudh ah, dhirta ayaa laga yaabaa in aan xitaa bloom, taas oo ka dhalatay taas oo aan xitaa lagama maarmaan tahay in laga hadlo wax ku saabsan goosashada. Sababtan awgeed, abuurista farshaxanka waa in ay doortaan meel aad u raaxo leh oo iftiin leh heer sare ah bacriminta ciidda.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo sifooyinka noocan oo kale ah sida dabacsanaanta, nalka iyo awoodda wanaagsan ee ay u gudubto qoyaanka.
Diyaarinta degdegga ah ee ciidda waxay noqon doontaa inaad qodo dalool iyo soo qaado iyada qadar badan oo bacriminta ah nooc ka duwan.
Qodobka qotodheer waa qiyaastii 60 sentimitir, dhererkuna waa 1 mitir. Marka xigta, buuxi maaddooyinka ku jira habka soo socda:
Lakabka 10cm oo ah dhoobo dhoobo / dhoobo dhoobo ah / dhagaxyada / jilicsanaanta qaboobaha ayaa la dhigayaa dhinaca hoose, kaas oo u adeegi doona sidii biyo ka daadi lahaa mustaqbalka.
Ku daadi dusha daboolka ah isku dar ah oo ah 3 qaybood oo dhul ah oo laga soo qaato beertaada, 3 qaybood oo cammuud ah, 3 qaybood oo humus ah iyo 1 qaybood oo ah peat.
Ceel la diyaariyay noocan oo kale ah waa mid ku habboon oo kaliya abuurista abuurka, laakiin sidoo kale loogu talagalay artichokes sii kordhaya oo leh caawimaad ka mid ah laamaha xidid, taas oo ah, geedo. Ka hor inta beerto, ciidda ceelka sidoo kale waa in yar qoyan.
Waxaan koraan geedo laga bilaabo abuurka artichoke: qaybaha ugu muhiimsan ee beereed
Shuruudaha iyo sifooyinka kale ee beereedka
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero geedo goor hore, sidaas darteed by habka waqti ku habboon beeritaanka geedo ee dhulka u furan, waxay horumarin kartaa si fiican iyo koraan xoog. Waqtiga ugu fiican ee tani waa bilowgii guga - qeybtii hore ee Maarso.
Waxaa fiican in ay ku beeraan sanduuqyada alwaax, kaas oo ah isku dar ah dhoobo dhirta gaarka ah waxaa lagu shubay dhoobo siman, humus iyo ciid. Si ay abuurka ah u Gagaab wanaagsan ka soo dhulka, carrada this ee sanduuqa waa in sidoo kale lagu hayn joogto ah qoyan.
Ilaa inta muuqaalka caleemaha ugu horreeya, sanduuqyada abuurka lagu beeray iyaga waxaa lagu hayaa aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo ama guryaha oo si toos ah looga dhigo guri ama guri, kormeerka nidaamka heerkulka aan ka yareyn + 18-20ºS.
Dhirta yar ee koray, kuwaas oo lahaan doona waqti ay ku soo baxaan caleen dhab ah (sida caadiga ah waxay dhacdaa 10-15 maalmood ka dib), waad soo deyn kartaa. Xakamaynta ayaa been ah xaqiiqda ah in warshad kasta waa in lagu shubaa weel gaar ah. Waxaa sabab u ah in qorshaha abuurka abuurka ma aha arrin, maadaama geedo yihiin transplanted mustaqbalka si kasta.
Marka quusta waa in ay tixgelisaa xaqiiqda ah in geedo of artichokes leeyihiin size caddaalad ah, sidaas darteed awoodda ah ee waa lagama maarmaan in la doorto weyn. Habboon - dheriyada peat-purulent, mugga ah ugu yaraan 0.5 litir.
Si saameyn loogu yeesho samaynta nidaam xidid awood leh oo ku yaal barkada artichoke mustaqbalka, markaad qabatid waxaad u baahan tahay inaad soo jiido caarada xididka. Si kastaba ha noqotee, ha ku dhaafin si aanay u dhicin dhirta.
Sidee loo daryeelaa geedo farshaxan?
Fikrado badan uma baahna geedo farshaxan ah ka dib marka la qaado. Caadi ahaan si fiican ayuu u qaadaa rootida, sidaas darteed beddelaadda dhirta lagama maarmaan. Waxa kaliya ee kaliya waa in ciidda ee dheryihii u baahan yahay in si joogto ah qoyan, iyo sidoo kale si looga hortago formation of haramaha ku jira.
Laakiin marka laga reebo tan, waa mid aad u muhiim ah quudiya dhirta. Gaar ahaan, ka hor dhammaadka 2 todobaad laga bilaabo xilliga qaadashada, ciidda leh geedo waxaa la bacrimiyey leh caawinta Doodwanaag.
Tani, bacriminta waxaa lagu qasi jiray biyaha ee saamiga 1 ilaa 10. Laba toddobaad ka dib, geedo artichoke waa dib u quudin, laakiin waqtigan waa lagama maarmaan in la isticmaalo Bacriminta macdanta, ma aha arrinta organic.
Sidoo kale, si ay geedo in loo diyaariyo sida ugu wanaagsan ee suurtagal ah koritaanka berrin bannaan, waa lagama maarmaan tahay in quusto.
Si arrintan loo sameeyo, koobabka geedo ah ee maalinta waa in loo soo baxaa waddada, si dhirta oo kaliya uma qabato heerkulka hawada, laakiin sidoo kale qorraxda dhalaalaya.
Geedo la beero dhul furan waxay bilaaban kartaa bilowga badhtamaha bisha May, ilaa iyo inta laga gaarayo heerkulka hawada ee waddada ayaa loo dhisay si diirran oo diiran.
Geedo of artichokes iyo shuruucda ay beerto ee dhulka u furan
Goorma ayaan dhirta ku kori karaa sariiraha?
Xagga sare ee aan horay u soo sheegnay in beerto geedo ka mid ah artichokes laga bilaabo laga bilaabo dhexe ee May. Si kastaba ha noqotee, waxaa ugu wanaagsan inaad diirada saartid muuqaalka cimilada ee gobolkaaga, tan iyo xataa bartamihii bishii Maajo waxaa jira marar badan oo baraf ah oo ku yaalla aagagga ka baxsan ama ka sarreeya Moscow.
Sidaa darteed, beerto waxay dib u dhici kartaa ilaa xagaaga laftiisa, sidaas darteed waxay qaadan doontaa waqti dheer oo dhib badan si tinker leh geedo. Waxay sidoo kale u baahan doontaa in la sii wado si loo soo afjaro joojinta, si loo siiyo taageero kobcitaan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad halis ugu jiri kartaa beeritaanka dhulka, laakiin si joogto ah ugu dabool dhirta habeenkii oo leh filim. Mararka qaarkood qariidado gaar ah ayaa lagu rakibay sariirta, taas oo ay ku haboon tahay in la fidiyo filimka difaaca iyada oo aan waxyeello u geysan dhirta naftooda.
Isbedelka nooca beeraha uu faa'iido u yahay geedo farshaxan?
Nidaamka abuurka ee geedo ah ee dhirta la tilmaamay ayaa si toos ah ku xiran tahay cabbirka uu ku guulaystay ee qaangaarnimada. Waxaan horay u soo sheegnay in dhererkoodu xitaa gaari karo 2 mitir, halka xajmiga dhirta sidoo kale uu ururiyay mid cajiib ah. Iyadoo lagu saleynayo sheygaas, waxaa lagula talinayaa in geedo farshaxan oo lagu dhex beeray qaab dabiici ah.
Waxay kudhacdey xaqiiqda ah in u dhexeeya safafka iyo dhirta ay ka baxeen meel isku mid ah, taas oo kiisaska farshaxanimada ku gaadho 70 centimitir (taas oo ah, qorshaha 70h70). Mid ka mid ah buulkeedii, taasi waa god ah geedo, laba dhir ayaa lagu beeray.
Sida aan u baahannahay inaan u diyaarinno godadka faylka, waxaan hore u qornay, laakiin waxaan sidoo kale sheegaynaa in waa inaadan beeran geedo aad u qoto dheer dhulka. Nidaamka asaasiga ah ee warshad this waxaa si ku filan loo horumariyo, sidaas darteed waxay qabsan kartaa dhagan, iyada oo aan xitaa u baahan tahay hilling.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Artichokes' ee sariirahaaga iyo daryeelkaaga: maxaa muhiim u ah in la tixgeliyo iyo wixii aan la ilaawin?
Miyaan u baahanahay in aan waraabiyo duurka artichoke iyo inta jeer ee la sameeyo?
Qoyso ciidda ay koraan kalluumeysatadu waa inay noqdaan kuwo si joogta ah u socda.
Waraabinta waxaa suurtagal ah in yar-yar 2 jeer todobaadkii, si kastaba ha ahaatee waqti isku mid ah waxaa suurtagal ah in la keeno 5 litir oo biyo ah.
Geedka weyn ee geedka wuxuu noqonayaa, qoyaanku u baahan yahay. Si kastaba ha noqotee, xad dhaafka badan ayaa sidoo kale noqon kara khatar, gaar ahaan haddii ciidku uu nuugo qoyaan la'aan ama biyaha dhulka ku dhow yahay dhulka.
Sidoo kale, waa muhiim inaad diiradda saarto xaddiga roobabka dabiiciga ah iyo sida caadiga ah. Guud ahaan, ha u oggolaan in qallajinta xad dhaafka ah ee ciidda - waxaadna ku guuleysataa natiijooyin wanaagsan ee korriinsho sii kordhaysa.
Xakamaynta ciidda agagaarka farshaxanka iyo jaridda haramaha
Maalinta ku xigta ka dib waraabin kasta oo dhirta, ciidda ku wareegsan waa in la furo. Tani waxaa lagu sameeyaa ujeedada ah in aan la sameynin daloolka dusha sare, taas oo ka hortagtay in gogosha hawada.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in si joogta ah loola wadaago sariiraha leh farshaxanka qorraxda kala duwan, kuwaas oo si gaar ah khatar ugu ah bilowgii hore ee koritaanka dhirta.
Cunto-qabashada quudinta: waxa Bacriminta lagu talinayaa in la isticmaalo?
Bacriminta dhirta ayaa lagama maarmaan u ah inay fuliso, sababtoo ah waxay ka jawaabaan ugu wanaagsan iyaga. Isla mar ahaantaana, natiijo fiican ayaa lagu muujiyey Bacriminta organic iyo macdanta.
Laakiin, marka laga reebo farshaxanka caadiga ah ee caadiga ah ee lo'da ama Bacriminta macdanta, kuwaas oo sida caadiga ah la qabto 15kii maalmoodba mar, waa muhiim in la fuliyo quudinta foliar.
Nuxurkooda ayaa ku jira xaqiiqda ah in dhirta lagu buufiyo xalal gaar ah, oo ay ka mid yihiin:
Chloride Potassium chloride (10 garaam).
Ash geed (10 garaam).
Superphosphate (25 garaam).
Sida caadiga ah ee buufinta noocan oo kale ah ma ahan mid aad u sarreeya, waxay noqon doontaa hal mar bishii. Faa'iidadooda weyni waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in tani aysan keli aheyn oo kaliya kor u qaadida heerka raadadka ee dhirta, laakiin sidoo kale waxay ka hortageysaa guuldarada ay u geysato aphids iyo roodhida.
Waxaan u hirgelinaa dhirta xilliga jiilaalka - illaa iyo sanadka soo socda
Ka dib goosashada, dayrta dayrta ee dhirta iyo imaatinka hargabka koowaad, qaybta aboveeg ee baadiyaha ah artichoke ayaa gebi ahaanba la gooyaa. Si looga hortago xididdada dhirta ee ay waxyeeleeyeen dhaxan, ciidda waa in la daboolaa rhizomes ee dhexroorka ciidda leh caawimaad ka caleemo opal ama caws.
Sidoo kale, xilliga qaboobaha, waxaa suurtagal ah in si gaar ah loogu duubo baraf badan sariiraha, taas oo hayn doonta kuleylka carrada.
Isu-uruurinta wax-soosaarista: sida loo go'aamiyo qaabdhismeedka la rabo?
Haddii aad isticmaashay xayiraadda korriinshaha sii kordhaya, markaa goosashada ayaa suurta gal noqon doonta sanadka ugu horeeya, inkastoo xaaladaha dabiiciga ah ay taasi dhacayso oo keliya marka labaad. Gaar ahaan, adiga nafsadaada ayaa ogaanaya in caleemaha cufan ee dhirta ee dhirta ay u muuqatay caws ubax.
Tiknikada ugu horreysa waxay ku habboontahay isticmaalka 2 toddobaad kadib. Dusha sare ee furan ee qaybtooda sare waxay ka markhaati kacaan.
Dhibaatada weyn ee ururinta farshaxanimada waa in ubaxyo isku xoqdo hal iyo waqti isku mid ah, sidaas darteed, qaan-gaarnimada mid kasta oo si gooni ah loo go'aamiyo, oo sidoo kale ka goosta baadiyaha si gaar ah. Wixii farsamo-yada waaweyn, waxa lagu talinayaa in ay ka baxaan 2-3 baroodh oo ku yaala geed walba oo leh 3-4 dambiilood oo kasta.
Sidoo kale, maya geedka waa in aan loo oggolaan inuu si buuxda ubax u noqdo, sababtoo ah sida noocan oo kale ah madaxda madaxa artichoke waa kuwo aad u adag waxayna noqdaan kuwo aan habboonayn isticmaalka.
Sidaa darteed, haddii aad ugu sareeyso artichoke waxaad arkaysaa midab buluug ah, waxaad ka fiirsan kartaa khudraddan sida aan habooneyn isticmaalka aadanaha.
Isticmaalka alaabada laga soo qaado baadiyaha waxaa lagu kaydin karaa waqti dheer oo ku filan, taas oo ah faa'iidadooda muhiimka ah. Gaar ahaan, haddii khudradda la sharraxay ay ku jiraan heerkul ah 0 ilaa + 1ºS, markaa natiijada waxaa suuragal ah in ay ku dhadhamaan 2-3 bilood oo kale.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kobcinta dhir 2019